Fikarohana momba ny firaisana Ny Trangam-panjakan'ny Zafindrafin'ny KGJ Weerasinghe | Indika Guneratne: Ahoana no nanampian'ny zazalahy iray hamotopototra ny fanadihadiana ny fiainany teo aloha - Fikarohana momba ny vatana teraka?
From: Ireo trangan-javatra momba ny karazana gay vaovao, Boky II, Ireo tranga folo any Sri Lanka, avy amin'i Ian Stevenson, MD
Ny fiainana sy ny fahafatesana ny KGJ Weerasinghe
Teraka tany 1888 any Wehelgoda, izay 2 kilaometatra atsinanan'i Matara, tanàna iray any atsimon'ny morontsirak'i Sri Lankan, i Weerasinghe. Matara, tamin'izany fotoana izany, dia nanana mponina momba ny 75,000 olona ary mipetraka 200 kilometatra na 125 kilaometatra avy ao an-drenivohitra Colombo.
Weerasinghe dia tsy nianatra afa-tsy efatra na dimy taona nefa nahira-tsaina fatratra, satria nanangana orinasa lehibe sy mahomby izy amin'ny maha mpivarotra hazo sy mpanao fifanarahana trano. Rehefa avy nitahiry ny volany dia lasa olom-pirenen'ny mpanankarena indrindra tao Matara izy, ary nampiasa ny sasany tamin'ny fianakaviany. Nanana mpanompo koa izy, ny iray nantsoina hoe Premadasa. Weerasinghe dia nanana fitoeram-bola na boaty vola nitahirizany vola sy zava-tsarobidy. Nanana basy koa izy, izay nampiasainy hihaza. Voaroba trano indray mandeha ny tranony, antony iray hafa nahatonga an'i Weerasinghe hanana basy.
Weerasinghe's Love of Elephants
Weerasinghe dia nanana trano sy trano maro tao amin'ny firenena, izay nitazonany omby sy elefanta. Elephants dia niasa tao anaty ala. Nanana elefanta ihany koa izy tao an-tranony tao Matara, izay teo akaikin'ny lalamby.
Weerasinghe dia tena tia an'ireny biby goavambe ireny ary nanoro hevitra izy fa amin'ny faran'ny herinandro dia tsy voatery miasa ireo elefanta mandra-pahatongany maraina mba hiara-misakafo sy hiara-milalao aminy. Ny elefanta, anisan'izany ny pachyderm zazalahy, dia manondraka rano amin'ny tompony, izay nahafaly an'i Weerasinghe,
Ny elefanta manana solontena ao Sri Lanka dia tsy afaka manome afa-tsy ny mpanan-karena ary ny zava-misy dia nanampy tamin'ny fanadihadiana ity tranga ity.
Voninahitra ho an'i Premadasa sy ny hafa
I Weerasinghe, rehefa nanangana ny harenany, dia malala-tànana ary afaka nanome trano sy trano manontolo ho an'ny mpiasany, anisan'izany ny mpiandraikitra ny tantsaha sy ny serasera Premadasa. Izy koa dia nanohana ny zana-drahalahiny, zanaky ny zokiny lahy, ary naka ilay zana-drahalahy sy ny vadiny niaraka taminy. Nanan-janaka vavy antsoina hoe Padminie izy mivady.
Weerasinghe dia tia miala amin'ny sehatra lehibe iray ary mividy trano lehibe kokoa sy mozika lehibe kokoa sy mahavariana kokoa izy. Nanomboka niaraka tamin'i Austin kely sy 1957 izy, napetrany tao anaty taratasy mba hividianana fiara Mercedes Benz malaza, saingy navotsotra izy tamin'ny minitra farany rehefa nitombo tampoka ny vidiny. Izy koa dia nanana fiara Ford sy Chevrolet, izay nampiasaina ho an'ny orinasan-dry zareo. Weerasinghe dia te-hidera ny zava-bitany sy ny fananany. Ny tena marina dia nanjary fantatra amin'ny anarana hoe "mudalali" ao Sri Lanka izany, izay manondro mpandraharaha mpikatroka mahery vaika, mpikatroka mafàna fo sy mahomby.
Ny hatsaram-panavotana no nanehoany hatsaram-panahy tamin'ny moanina bodista. Izy tenany dia Bodista feno fitiavam-bavaka izay nanorina tempoly maro, trano fialan-tsasatra ho an'ireo mpitety fiangonana ary nanolotra trano ho an'ny tempoly bodista. Nanao fitsangantsanganana isan-kerinandro nankany amin'ny toerana masina izy izay nivavahan'ny Buddhists sy Hindus ny Hindu God Kataragama. Isan-taona dia nigadra an'arivony ny lamasinina nankany Matara mba hivavaka tao amin'ny tempolin'i Kataragama. Wearasinghe koa dia tia ankizy ary nalala-tanana azy ireo.
Ny filokana, ny fisotroana, ny fanambadiana ary ny hatezerana
Weerasinghe dia mpiloka be mpiloka ary afaka nanangona vola be. Nandray anjara betsaka tamin'ny loterie koa izy. Teo anelanelan'ny 1958 ka hatramin'ny 1959 dia nahazo ny 100,000 Rupees tamin'ny karatra izy, izay vola goavana. Tena nahay be tamin'ny karatra izy izay tsy nety nilalao niaraka taminy.
Nisotro toaka izy ary nisotro toaka be nandritra ny taona maro, na dia taorian'ny 1945 aza dia nahena ny fihinanana azy. Na izany aza, nisotro alikaola isak'alina niaraka tamin'ny namany izy, nihinana whisky sy arrack. Ho fanampin'izay, nanenjika vehivavy izy rehefa nahafaly azy.
Weerasinghe dia nangoraka, na dia vitsy aza ny hatezerany. Maro anefa no natahotra azy. Nandrahona ny hamono ny mpanompony izy rehefa nandiso fanantenana azy ireo, na dia tsy nanao izany mihitsy aza izy. Indray andro izy dia niady hevitra tamin'ny olona iray niaraka taminy ary i Weerasinghe dia namely mafy ity lehilahy ity. Tamin'ny valifaty, ity olona ity dia nandrahona hitifitra ny Weerasinghe, na dia namela ny fihetsika nataony aza ireo namana.
Fanambadiana, fanoloran-tena ary famonoana
Weerasinghe dia nanambady an'i BE Abeynayake, saingy nanjary toy ny sendika sarotra izany. Nolaviny ny filokana, ny fisotroan-dronono ary ny fiterahana, izay niteraka adihevitra matetika. Noho ny fifandiranan'izy ireo dia noraran'i Weerasinghe ny fianakaviany hiditra ao an-tranony.
Tao amin'ny 1960, nanapa-kevitra ny hisaraka amin'ny vadiny izy ary nandefa azy. Ny rahalahin'i Weerasinghe taty aoriana dia nanampy ny mpivady nifanerasera ary niverina tany amin'ny tranon'ny fianakaviana tao Matara. Tsy nanan-janaka ireo mpivady ireo, ka ny Weerasinghe no nanangana an'i Padminie ho zanakavaviny, ka nanome toky ny filaminana ara-bola ho an'ny ho avy.
Weerasinghe dia nanana diabeta ary voatery nampidirina hopitaly imbetsaka nandritra ity toe-javatra ity. Tamin'ny volana 1960 dia nitaraina noho ny fanaintainana izy ary nahazo an'i Premadasa mpanompony, nitondra azy tany Colombo izay nidirany tao amin'ny hopitaly foibe. Tao no nitehirizana ny fitsaboana tao aminy ary niharatsy haingana. Maty tamin'ny volana 18 tamin'ny 1960 tamin'ny taona 72 izy. Ireo rahalahy teo am-pandriany, fony izy nigadra, dia nampiditra ny zokiny lahy sy Premadasa. Padminie, izay efa 11 taona tamin'izay fotoana izay, dia tsy teo intsony rehefa maty ny rainy nitaiza azy.
Nanana fandevenana lehibe izy niaraka tamin'ny elefanta elefanta efatra tonga nanatrika, niakanjo fotsy, izay lokon'ny loko Weerasinghe, ary koa ny loko fisaonana tany Sri Lanka.
Weerasinghe dia mamelona ny 18 Miles avy amin'ny toeram-ponenany
Indika Guneratne dia teraka tamin'ny Jolay 26, 1962, roa taona latsaka taorian'ny nahafatesan'i Weerasinghe. Ny rainy, mpamboly, dia GD Guneratne ary ny reniny dia SD Harriet. Nipetraka lalina tao anaty ala iray ny fianakaviana izay nanasongadina fambolena fingotra tany amin'ny faritra antsoina hoe Korale Ima, izay 30 kilometra na 18 kilaometatra avy any Colombo. Nipetraka tao amin'ny trano kely iray tao amin'ny fambolena fingotra ilay fianakaviana.
Raha vao telo taona mahery i Indika, dia nanomboka niresaka momba ny fiainana teo aloha izy ary nilaza fa nipetraka tany Matara izy. Raha ampitahaina amin'ny toe-javatra maotin'ny ray aman-dreniny, nilaza i Indika fa nanan-karena izy, nanana trano lehibe kokoa sy tsara kokoa noho ny trano misy azy ankehitriny ary nanana elefanta izy.
Nitarany izy fa tsy manana herinaratra ny tokantrano Guneratne, raha oharina amin'ny fiainany taloha izay ahafahany mitodika amin'ny jiro amin'ny fanetsehana zavatra eo amin'ny rindrina, mety ho fanovàna. Notsindriany fa ireo jiro dia tsy nandalo, raha oharina tamin'ireo jiro kerosene nampiasain'ny fianakaviana Guneratne. Izy koa dia naneho hevitra momba ny tsy fahampian'ny hena sy ny hatsaran'ny trondro eo amin'ny latabatra fisakafoanana, ary koa ny fahasosoran'ny akanjon'ny reniny.
Fiainana taloha "Benz", telefaona, vola amam-bola, lalamby ary zotram-piasana Premadasa
Ankoatra izany, Indika nilaza fa tamin'ny fiainany taloha dia nanana fiara sy kamiao izy. Nolazainy fa "Benz" ny fiarany. Indika, fony kely, dia liana tamin'ny fiara liana tamin'ny fiara ary nanamarika ny fahasamihafana teo amin'ny fiara niainany taloha sy ireo mpitsidika nanodidina ny tanànany.
Nolazainy ihany koa fa nanana telefaonina izy tamin'ny fiainany taloha, zavatra tsy dia nisy tamin'ny fianakaviana Guneratne. Indika mihitsy aza naneho ny fomba nampiasany izany tamin'ny fametrahana ny tànany teo akaikin'ny vavany ary niteny hoe "Hello", izay teny ampiasain'ny Sri Lanka amin'ny famaliana ny finday. Io tokoa no teny nampiasain'i Weeasinghe rehefa namaly antso an-telefaona.
Niteny tamin'ny ray aman-dreniny i Indika hoe "manana volavolan-dapam-bola" izy ary raha nentiny tany Marata izy dia "afaka manome anao ny vola." Raha misy zavatra mampahatezitra an'i Indika, dia mety handrahona ho any Matara izy. Nizara ihany koa i Indika fa nanana mpanompo iray antsoina hoe Premadasa izy.
Raha niresaka momba ny toerana misy ny fiainany taloha izy dia nilaza fa teo akaikin'ny lalamby tao Matara izy io. Gaga ny ray aman-dreniny fa nampiasa ny teny hoe "lalamby" izy hatramin 'ny fahatanorany, tsy nahita fiaran-dalamby na lalamby intsony i Indika ary ny ray aman-dreniny dia tsy nino fa nisy olona nanodidina azy hatramin' izay dia nampiasa ireto teny ireto. Nolazainy ihany koa fa nisy ny fakana an-keriny tamin'ny fiainany taloha.
Ny fahazotoan'ny fiainana taloha
Indica dia nizara fa nisotro toaka teo amin'ny fiainany teo aloha izy ary nanohitra ity fahazarana ity ny vadiny taloha. Nanontany ny rainy ny fomba hangatahany hosotro. Ho an'ity fanontaniana ity dia namaly i Indika hoe, "arraku bagayuk," izay fehezanteny ampiasaina ao Sri Lanka izay midika hoe "manondraka zava-pisotro misy alikaola." Voalaza fa fehezanteny tena mahazatra ho an'ny ankizy madinika izany.
Hoy izy isaky ny alahady: “Tsy maintsy mandeha any Colombo aho hividy saris ho an'ny vadiko ary akanjo ho an'ny zanako.” Rehefa nanontany azy ny reniny raha mahay mividy saris dia nilaza izy fa fantany. Taty aoriana dia voamarina fa tena handeha any Colombo i Weerasinghe amin'ny alahady mba hiantsena saris ny vadiny ary fitafiana ho an'ny olona ao amin'ny fianakaviana.
Indika dia mamelona ny elefanta sy ny fahatsiarovana ny fiainany taloha
Indika no nilazalaza an'i Indika tamin'ny fomba fanao tamin'ny fomba niainany nandritra ny fiainany taloha niaraka tamin'ny elefanta, anisan'izany ny fomba hanosehana ny elefanta tiany hanondraka azy. Toy ny hoe nialany ny fotoana i Indika ary ny rainy dia nahatsikaritra fa: "Na dia teo aza ny vatany, dia toa tao ny sainy," izay midika hoe teo amin'ny fiainany teo aloha tany Matara.
Indraindray dia toa nanadino ny toerana misy azy i Indika ary nanao zavatra toy ny hoe tao Matara izy. Nandritra ireo fizarana ireo dia nilaza izy hoe:
"Aiza ny kitapoko?"
"Aiza ny basy?"
Nilaza i Indika fa nanan-janaka teo amin'ny fiainany teo aloha izy, izay toa niresaka momba an'i Padminie zanany vavy natsangana. Rehefa nanontaniana izy hoe efa antitra ny zanany, dia naninjitra ny tanany araka izay vitany i Indika, nanondro fa izy io dia lehibe. Tadidio fa 11 taona i Padminie rehefa maty i Weerasinghe.
Rehefa naratra teo amin'ny molony i Indika dia nilaza tamin'ny reniny izy mba hampahafantatra amin'ny "ny vadiny." Rehefa nanontany izy hoe ahoana no hahitana ny vadiny, dia namaly i Indika fa ho any Colombo izy ary avy eo ho any Matara. Nomarihiny fa ho any ny fiarany. Nangataka ny vadiny taloha izy tamin'ny fotoana hafa izay tsy salama.
Rehefa nanontanian'ny ray aman-dreniny ny fomba niainany niaraka tamin'izy ireo, dia nilaza i Indika fa nanana fifamaliana tamin'ny vadiny izy ary avy eo dia tonga tao amin'ny tranony vaovao.
Ian Stevenson, MD dia manadihady ity raharaha momba ny Reincarnation ity
Mifototra amin'io fampahalalana io, ny raim-pianakavin'i Indika dia manontany ireo namana izay nipetraka tany Matara na iza no nahafantatra ny olona tao amin'io tanàna io. Nianatra izy fa misy olona iray ao Matara izay mifanaraka amin'ilay famaritana nomen'ny Indika ary ny anaran'ny fianakaviany dia ny Weerasinghe. Ny fianakavian'i Indika dia tsy nanao zavatra hafa hanandrana hitady na hifandray amin'ny fianakaviana Weerasinghe.
Tsy mitsahatra ny miresaka momba ny fiainany teo aloha i Indica tamin'ny faran'ny 1966, fony izy teo amin'ny 4 ½ taona.
Roa taona taty aoriana, tamin'ny Janoary 1968, Ian Stevenson, MD dia nianatra voalohany mikasika ny fahatsiarovan-tenan'i Indika tamin'ny lasa teo aloha raha naharay taratasy iray momba ny tranga nosoratan'i VF Guneratne, havana akaiky an'ny fianakavian'i Indika. Stevenson dia nandeha niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy, Francis Story, mba hihaona amin'i Indika sy ny fianakaviany tamin'ny Martsa 1968.
Taorian'ny fihaonana tamin'ny fianakavian'i Guneratne tao Korale Ima ary nanangona ny fanambarana nataon'i Indikka momba ny fiainany teo aloha, dia nandalo ny 100 kilaometatra avy eo amin'ny Corale Ima ka hatrany Matara i Stevenson, Francis Story, Indika ary papa Indika mba hanohy ny fikarohana. Na dia fantatry ny mpahafantatra ny rain'i Indika aza fa nisy mpandraharaha iray matara antsoina hoe Weerasinghe mifanaraka amin'ny fanoritsoritana ny fahatsiarovan-tenan'i Indika teo aloha, i Stevenson dia naniry ny hahita raha ny mpandraharaha hafa ao Matara dia mety ho kandidà ho an'ny persona persona Indika.
Fikarohana ho an'ireo mpandraharaha mpanan-karena amin'ny Elefanta
Ny fanalahidy lehibe dia mpandraharaha iray mpanankarena izay nanana elefanta. Ny fanadihadihana nataon'i Stevenson dia namoaka mpandraharaha maty roa hafa izay nanana elefanta tao Matara. Stevenson dia namintina fa ny fanambaran'i Indika dia tsy nifandray tamin'ireo olona roa ireo ary ny fehin-keviny dia tsy maintsy ho ny an'ny Weerasinghe no nahafantarana an'i Indika taloha.
Nifindra tany amin'ny tranon'ny fianakaviana Weerasinghe àry izy ireo. Nanambara i Stevenson fa ny fianakavian'i Indika sy ny fianakaviana Weerasinghe dia tsy nanana fifandraisana teo aloha ary na izany aza, rehefa nifankahita ireo fianakaviana roa, ny fihetseham-pon'i Stevenson dia hoe samy niasa ny fianakaviana roa raha vao nifanena izy ireo. Stevenson dia namintina fa ny Indika dia tsy afaka nahafantatra ny antsipirian'ny fiainan'i Weerasinghe amin'ny fomba mahazatra.
Indika kosa dia tsy nanao fanamarihana mivaingana tao amin'ny trano Weerasinghe. Stevenson dia nilaza fa ny Indika, izay enin-taona eo ho eo izao, dia nitsahatra tsy niresaka momba ny fiainany taloha efa ho 2 taona talohan'izay. Ao amin'ny andiany 1200 namboarina tranga taloha fitadidiana fiainana nandinihan'i Ian Stevenson tao amin'ny University of Virginia, ny zaza, amin'ny salan'isa, dia tsy mahatadidy ny fiainana lasa tamin'ny 7.5 taona. Stevenson dia nanatsoaka hevitra fa i Indika dia tsy afaka nanao fampahafantarana ireo havana taloha tany Matara satria efa tara loatra, dia tsy nahazo fahatsiarovan-tena tamin'ny fiainany tamin'ny maha-Weerasinghe azy i Indika.
Ny toetra taloha momba ny toetran'ny fiainana dia mitohy
Ian Stevenson dia nanamarika fa misy fitoviana maro ao amin'ny toetran'ny Weerasinghe sy Indika. Samy nahazo:
Ny lokony tena fotsy
Tahotra ny mpangalatra
Tetika hamonjena vola
Voninkazo elefanta lehibe sy liana amin'ny biby
Hajao ny moanina bodista
Fitiavana ho an'ny hena sy trondro avo lenta
Tombontsoa lehibe amin'ny fiara
Ny fironana hirehaka sy hikiakiaka
Mafana ny andro
Fitiavana ny alika sy ny tsy fifankahazoan'ny saka
Ian Stevenson dia nitsidika ny fianakaviana Guneratne indray tao 1973, fony Indika dia 11 taona. Na dia nitsahatra tsy hiresaka momba ny fiainany taloha izy fony izy efa-taona sy tapany teo aloha, dia mbola nampiseho ny fitondrantenan'ny fiainany taloha ihany Indika i Indika. Nanohy nitaky sakafo sy fitafiana avo lenta izy, nanana fahalianana tamin'ny elefanta, tapakilan'ny loteria sy fiara, izay ho azony hanombohana, ary mbola nalemy haingana izy. Raha manontany an'i Indika i Stevens raha te ho lehibe izy, dia namaly izy hoe tsy mahagaga raha "mudalali", izany hoe ny fiainany taloha dia lasa mpandraharaha mpanafika sy mahomby.
Ny talenta taloha sy ny fitondran-tena: I Indika dia nanana toetra sy tombontsoa mitovy amin'ny Weerasinghe, anisan'izany ny fironana hamonjy vola mba hanangonana harena.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Afaka nahita ny fiainany taloha i Indika.
Loharano: Stevenson, Iana: Ireo trangan-javatra momba ny karazana gay vaovao, Boky II, Ireo tranga folo any Sri Lanka, pejy 203-234